Category: ဆေးပညာရပ် 0
12>> Category: ဆေးပညာရပ်
ထူ ထပ်. ဆံပင်ပေါ် ခေါင်းဖီး
မ ESCAP (လွတ်မြောက်ရန်ဆိုလိုတာကအင်္ဂလိပ်ထွက်ပေါက်, ထံက၎င်း, အဖြစ်မှန်ကနေလွတ်မြောက်အောင်) ကိုပယ်ရှားလူနေမှုပုံမှန်အတိုင်းစံချိန်စံညွှန်းများထံမှရရန်လူမျိုး၏ -stremlenie လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။ ဝေးပြဿနာများမှရရန်အလိုဆန္ဒ, ထင်ယောင်ထင်မှားအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်မြင့်၏တစ်ဦးထက်ပိုကျဉ်းမြောင်းတဲ့သဘောနဲ့ ESCAP ဖြစ်ပါတယ်။ ESCAP ၏ method ကိုတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, ဘာသာရေး, လိင်, ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားစေနိုင်ပါတယ် - ။ အချို့မဖြေရှင်းနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာများလျော်ကြေးပေးရန်အသုံးပြုသည်တစုံတခုကိုမျှ ESCAP: သမိုင်းတစ်လျှောက်တစ်နည်းနည်း မ ESCAP ၏ကျယ်ပြန့်သဘောအရခုနှစ်တွင်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လက်ခံစံချိန်စံညွှန်းအားပြန်လည်စဉ်းစားရန်ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်သံသယဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသေခံဖို့ဦးဆောင်သောကြောင့်, မဟုတ်ရင်စုစုပေါင်းအလေးချိန်၏ခွဲခြာ, မဖြစ်နိုင်ချေသောကြောင့်ထိုသို့အစဉ်အမြဲလူမှုရေး, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့အဆင့်မြင့်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းနာ​​းလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အကျယ်ပြန့်သဘောနဲ့ ESCAP ၏အယူအဆထုတ်ဖေါ်ကြောင်းအဆိုပါအကောင်းဆုံးဥပမာ, ကျော်ကြားသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရှေးဟောင်းဂရိအတွေးအခေါ်ပညာရှင် Heraclitus (540-480 ဘီစီ) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြို့တော်ကိုကျန်ရစ်ခဲ့သောအရာ၏, ဧဖက်နေထိုင်သူများအဘို့အလေးနက်မထီမဲ့မြင်ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်မြက်နှင့်အပင်ပေါ်အစာကျွေး, တောင်ရှိသူ၏နေအိမ်တွင်အပြစ်နှင့်လွတ်။ တစ်ဦး ESCAP ၏ဥပမာနှင့်သူလူတို့တွင်နေထိုင်ခဲ့ပေမယ့်စည်ထဲမှာနေသေး၏သောကလက်ခံစံချိန်စံညွှန်းများအနေဖြင့်မိမိအအထီးကျန်မှုတွေပြသခဲ့သည်။ သော်လည်းအဘယ်သူတစ်ဦးကျော်ကြားသောအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဒိုင်အော်ဂျနိဇ်အဖြစ်ထမ်းဆောင်နိုင် ထို့နောက်နဲ့ဒီကနေ့အစဉ်အလာကြောင့်အဆိုးမှတ်သော ESCAP အများအပြားနောက်ထပ်ဥပမာ, စာရင်းပြုစုရန်ဖြစ်နိုင်ကတည်းက: လူတွေရိုးရိုးတခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မရနိုငျသောအဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်ရန် မ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကို - တစ်ဦးလက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်ပင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ရပ်ဆန်း ESCAP monotheistic ဘာသာတရားများ၏ပေါ်ပေါက်ရေးဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ Monasticism မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ESCAP ၏ပုံစံတစ်မျိုး, ဒါပေမယ့်လေးစားမှုဤပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဤအပြိုင်ငါတို့အယူမှားသူ၏ဖိစီးနှိပ်စက်မှု၏သမိုင်းဆိုင်ရာကြိမ်အောက်မေ့သတိရ - သို့သော်လည်းသူတို့သည်လည်းတကယ်တော့လည်း ESCAP ၏သရုပ်သ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏သီးခြားဥပဒေများပေါ်နေထိုင်ခဲ့နှင့်ကြပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ခုနှစ်တွင် 20 ရာစုကတည်းကလျင်မြန်စွာစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲသော, ESCAP ၏ပိုပြီးနှင့်အသစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အခုတော့သူတို့ကအန္တရာယ်ကင်းအခန်းကဏ္ဍကို-playing games ကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောအကျိုးစီးပွားများနှင့်ဝါသနာမသာပါဝင်သည်, သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်ကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောအလေးအနက်အမှုအရာ။ ဤအချိန်တွင်ဖက်ရှင်သို့ logged ESCAP ၏မြေမှတ်တိုင်ကိုဥပမာအဘယ်သူ၏အဖွဲ့ဝင်များပျော့ပျောင်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သဘာဝတရား၏ရင်ခွင်အတွက်မြေတပြင်လုံးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ဘဝအသက်တာကိုလောင်ကိုပီလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ ESCAP ကယနေ့ နှစ်ဆယ်ရာစုအကုန်ကတည်းက ESCAP ၏အသစ်သောပုံစံများကိုယူ - ယခုလူတိုင်းသင်ပြင်ပပြဿနာများကိုမသက်ဆိုင်သော, စိတ်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်လောကသို့မှောက်လျက်ထိုးရန်ခွင့်ပြုသည်, ကွန်ပျူတာဂိမ်းဤလောကသို့ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာတိကျတဲ့မျိုးနွယ်စုများနှင့်အွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသို့ပင် entry ကိုလည်း ESCAP ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ ESCAP ၏ အနည်းဆုံးဖက်ရှင်အသုံးအနှုနျးကို - Downshifting (အင်္ဂလိပ်မှဘာသာပြန်ထားသောချရွေ့လျားကိုဆိုလိုသည်) ။ ဒါဟာဂုဏ်သိက္ခာ၏ ငြင်းပယ်ခံရအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် အာရုံကြောမလိုအပ်ပါဘူးအလုပ်၏မျက်နှာသာအတွက်ရာထူး, အချိန်နှင့်လူတစ်ဦးလုံလောက်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အရွက်။ ဤဖြစ်ရပ်ဆန်း၏န​​ောက်ထပ်ပုံစံကိုသမရိုးကျသဘောမျိုးများအတွက်ငယ်လေးတစ်ဝင်ငွေကအပေါ်အဲဒီမှာအသက်ရှင်ရန်တစ်စီးပွားရေးအရမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့တိုင်းပြည်ရွေ့လျားပါဝငျသညျဟူအထူးပထဝီ ESCAP ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က ESCAP ကုသမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူမမှန်မှုလိုအပ်သည်ယုံကြည်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ လူနေမှုပုံစံစတဲ့မျိုးဦးဆောင်လေ့အဘယ်သူသည် Sami အတူတူလူ, ရိုးရိုးစိတ်ဖိစီးမှု, အဆိုးမြင်, မြန်မြန်, ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားနှင့်ဖောင်းပွခြင်းကိုအပြည့်အဝနေ့စဉ်အသက်တာ၏အဖြစ်ငြီးငွေ့ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း, ငွငျးဆကြောင်းစဉ်းစားပါ။ တကယ်တော့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်ပြီးသတ်တယ်အကဲဖြတ်ပေးရဖို့ခက်ခဲဖြစ်ပါသည် - ကဖြစ်သည်နှင့်အဖြစ်နိုင်အမြဲရှိလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်အချို့လမ်းအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည် မ။
ဖုန်းမှကွဲပြားခြားနားသော smart ဖုန်း?
အခုတော့လူတိုင်းနီးပါးဆဲလ်ဖုန်းရှိပါတယ်။ အချိန်နေဆဲမခံမရပ်ပါဘူး, နှင့်ဆက်သွယ်ရေး၏ဤနည်းလမ်းများအဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်လျက်ရှိသည်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ functions ရတဲ့။ သာမန်မိုဘိုင်းဖုန်းကို "ညီ" သည်ထင်ရှားဒါကြောင့်ဤမျှလောက် - ဆယ်လူလာသုံးစွဲသူများအကြားရရှိမှုဟာစမတ်ဖုန်းလူကြိုက်များကြီးထွားလာသည်။ သင်သည်သင်၏ "ပြွန်" update လုပ်ဖို့လိုမဝယ်အားအဘယျအံ့သြလျှင်နှင့် - သေချာဘို့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်း, သင် store မှာနှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ်များကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ဟူသောအကြားကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ သမ္မာတရားကိုကံမကောင်းရှိသမျှရောင်းချသူပညာရှိရှိဖုန်းမှတစ်ဦး smart ဖုန်းအကြားခြားနားချက်ကိုရှင်းပြနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတွင် - ကိုကူညီ ။ Phone နှင့်စမတ်ဖုန်းဘယ်သူသောသူသည် ?
အဟောင်းကိုမြို့သူမြို့သားအဆောက်အအုံများ အများစုဟာ - တစ်ခုလုံးကိုပင်လယ်အော် sooruzheniya.
မကွဲပြားသောစမ်းသပ်မှုပိုကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရန်ကူညီပေးသည်အများအပြားရှိပါတယ်။ တဦးတည်းစိတ်ဝင်စားစရာဥပမာဟာသ၏စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုရယ်စရာစာပိုဒ်တိုများ TUF - ဒီသည်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများကိုလူ့အပြုအမူနှင့်လှုံ့ဆျောမှု၏ကားမောင်းတပ်ဖွဲ့များကရောဂါတခုပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သောစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါသည် မ။ အပြည့်အဝစမ်းသပ်မှုအဖြစ်အများအပြား 100 အဖြစ်ပါဝင်သည်စဉ်သာ 23 စာကြောင်းများပါဝင်သည်ဟုစမ်းသပ်မှုဟာသတစ်ခုအတိုကောက်ဗားရှင်းရှိပါတယ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အဆိုပါစမ်းသပ်မှု သာမိနစ်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်စမ်းသပ်မှုရန်။ ကိုအောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များ Read နှင့် 7-အမိန့်မဆိုသူတို့နှင့်အတူမပတျသကျ။ မှထုတ်ပြန်သော။ လိင်။ ငွေရှာ။ ဖက်ရှင်။ မိသားစုဘဝကိုဒုက္ခ။ ရပ်ရွာအတွက် မငြိမ်မသက်။ မို။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များ အဆိုပါအမွေးတစ်စာရေးဆရာဖြစ်ရပြီ။ သူဟာအတောင်ပံရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ပျော်ရွှင်မှုပိုက်ဆံအတွက်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အရေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ စနစ်တကျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဝိညာဉျသကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အလို့ငှာ, အဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပဏာမခြေလှမ်းအအရှုပ်တော်ပုံ၏ခင်ပွန်းနှင့်အသံဒီဇိုင်းနဲ့ပိုင် - ။ သူ၏ဇနီး မည်သူမဆိုရဲ့လည်ချောင်းယူ, ဒါပေမယ့်တစ်ပုလင်းမနေပါနဲ့။ ငါပျံသန်းအကြံအစည်၏အိပ်မက်မက်ပေမယ့်နွေရာသီရာသီဥတုအခြေအနေအဘို့မစောင့်ခဲ့ဘူး။ "ခုနစ်ကြိမ်တိုင်းတာ - တစ်ကြိမ်ဖြတ်" - ငယ်ရွယ်ရောင်းသူမှအဟောင်းကရှင်းပြခဲ့သည် ။ ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူပျင်းတယ်, ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိအိပ်ချင်တယ်။ နှစ်ဦးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအကြားရွေးချယ်တဲ့အခါ နှစ်ခုယူ။ ထို့နောက်သူကမ လက်ပစ်ဗုံးသူမက manual ၏မစိုးရိမ်ကြ။ ကလေးများသည် - အသက်တာ၏ပန်းပွင့်။ သူတို့ကိုသို့သော်ပယ်ချခံရဖို့မခံပါနဲ့။ ဒါကြောင့်ထောင့်မလှန်ကြောင်းသေချာပါစေ, ဖက်ရှင်နှင့်အတူတက် Keeping ။ သာလျှင်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာပိုက်ဆံအိတ်ဖက်ရှင်နှင့်အတူတက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်န့်အသတ်ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးကလူကန့်သတ်ထားကြပါပြီသလဲ?
Folliculitis - ကုသရေး
ကို folliculitis - ထိုဆံပင်တစ်ဦးရောဂါကူးစက်ရှိပါတယ်ထားတဲ့အတွက်တစ်ဦးအရေပြားရောဂါ။ သာမိမိနှုတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သောဆံပင်၏မျက်နှာပြင်တစ်ခုရောင်ရမ်းခြင်း, - အများစုကတော့ sycosis folliculitis နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ထို follicles သို့နက်ရ​​ှိုင်းသောရောဂါကူးစက်မှု၏ထိုးဖောက်မှု ostiofollikulit folliculitis အသွင်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူ။ အကြောင်းရင်း folliculitis မ folliculitis ရောဂါကိုအောက်ပါအမျိုးအစားများသို့ခွဲခြားထားတဲ့နှင့်အတူ ဆက်စပ်.
နေ့စဉ်မိန်းမသည်မိမိအိမျ၌ကြိုးကွင်းခပ်, စင်ပေါ်နှင့်စာရေးအမျိုးမျိုးနှင့်အတူကြီးမားတဲ့နဲ့လှပတဲ့ဗီရိုကြီးနှင့်အဝတ်အစား, ဖိနပ်များနှင့်အခြားအမှုအရာ၏ကြီးမားသော number ကိုလိုက်လျောညီထွေသောအိပ်မက်။ မဗီရိုသာမန်ဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်သင်လျောက်ပတ်ပရိဘောဂနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကျိုးအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်အတွက်ကြီးမားသောကြေးမုံစီစဉ်ပုံမှန်အတိုင်းဗီရိုထက်အများကြီးပိုပြီးအဆာကိုနေရာချနိုင်သည့်အတွက်အထူးတပ်ဆင်ထားအခန်းတစ်ခန်းကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Agree - ဒီဆိုမိန်းမသည်တစ်ဦးပရဒိသုဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ခုနှစ်တွင်, မိမိလက်နှင့်ကြီးများနှင့်အထူးသဖြင့်သေးငယ်တဲ့တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းတစ်ခန်းစီစဉ်ဖို့အိမျတျော၌လုံလောက်တဲ့သိုလှောင်မှုကိုအခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်အခြား Nook ခွဲဝေချထားပေးရန်နှင့်ကြီးမားသောဗီရိုထဲသို့လှည့်ရန်ဤမျှခက်ခဲသည်မဟုတ်။ ဒီ master class မှာ, ကျနော်တို့ကိုမိမိလက်၌ Plasterboard အတူတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းကိုတပ်ဆင်ဖို့ဘယ်လောက်, သင် options တွေကိုတဦးတည်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ start ကြမ်းပြင်အစီအစဉ်ကို define ရန်။ ဤအမှု၌, ငါတို့သည်လောက် 7.